သမ္မကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကတော်အမှန်ဖြစ်ပါသ လော့။?
ေမးခြန္း: သမ္မကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကတော်အမှန်ဖြစ်ပါသ လော့။?
အေျဖ: ကျွနု်ပ်တို့ဖြေဆိုရသောအဖြေသည် ကျွနုု်ပ်တို့သည် သမ္မာကျမ်းစာကို မည်ကဲ့သို့မြင်ကြောင့်နှင့် ကျွနု်ပ်တို့အသက်တာ၌ ၎င်း၏အရေးပါမူကိုထင်ရာမြင်ရာတွေးတော၍ဆုံးဖြတ်ဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ပေ။ သို့သော်သမ္မာကျမ်းစာက ကျွနု်ပ်တို့၏ ခရီးအဆုံးကို ဖော်ပြပါလိမ့်မည်။ သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကတော်မှန်လျှင် ကျွနု်ပ်တို့သည် မြတ်နိုးသင့်သည်။ လေ့လာ သင့်သည်။ နာခံသင့်သည်။ ယုံကြည်အားကိုးသင့်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာသည် နှုတ်ကတော်ဖြစ်၍ ၎င်းကိုလျစ်လှူရှုခြင်း သည် ဘုရားသခင်ကိုလျစ်လှူရှုခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်က ကျွနု်ပ်တို့အား သမ္မာကျမ်းစာပေးခြင်းသည် ကျွနု်ပ်တို့အပေါ် သူထားရှိသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို သက်သေပြရန်နှင့်ထင်ရှားစေရန်ဖြစ်သည်။ “ဗျာဒိတ်တော်” ၏ အဓိပ္ပါယ်သည် ဘုရားသခင်က လူသားများအား သူသည်မည် သည့်အရာသူကြောင်းကိုဖြစ်စေ၊ ကျွနု်ပ်တို့သည် သူနှင့်မည်ကဲ့သို့စစ်မှန်သော မိတ်သဟာဖွဲ့နိုင်မည်ကိုဖြစ်စေ ဖော်ပြလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဤအရာများကို မသိသောသူတို့သည် သမ္မာကျမ်းစာထဲ၌ ဘုရာသခင်ဖွင့်ပြသော အရာများကို မသိနိုင်ပေ။ သမ္မာကျမ်းစာထဲ၌ ဘုရားသခင်ဖော်ပြသော သူ့အကြောင်းသည် နှစ် ပေါင်းတစ်ထောင်ငါးရာကျော်ရှိသောလည်း လူသားတို့တွင် ဘုရားသခင်နှင့် မိတ်သဟာရဖွဲ့နိုင်ရန်အတွက် ဘုရားသခင်အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သိသင့်သိ ထိုက်သောအရာများကို သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင်တွေ့ရသည်။ သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်လျှင် ယုံကြည်ခြင်း၊ ဘာသာရေး လှုပ်ရှား မှု နှင့်လူမူကျင့်ဝတ်တို့တွင် အဓိက သွန်သင်ပေးသောတရားတော်ဖြစ်သည်။
ကျွနု်ပ်တို့မေးရမည့်မေးခွန်းသည် သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကောင်းသော စာအုပ် တစ်အုပ်သာမဟုတ်ကြောင်း ကျွနု်ပ်တို့မည့်သို့သိရှိနိုင်မည်နည်း။ တခြားသော ဘာသာရေးစာအုပ်များထက် သမ္မာကျမ်းစာသည် ယုံကြည်ကိုးစားဖွယ်ကောင်းသော စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ကြောင်း မည်သို့သက်သေပြမည်နည်း။ သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင် ၏ နှုတ်ကပတ်တော်၊ ဘုရားမှုတ်သွင်းသောစာအုပ်နှင့် ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ခရစ်ယာန် ်ကျင့်ရိုးကျင့်စဉ်အတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော စာအုပ်ဖြစ်ကြောင်း ကျွနု်ပ်တို့သည်ကွက်ကွက်ကွင်း ကွင်းဆင်ခြင်လိုလျှင် ဤကဲ့သို့သောမေးခွန်းတို့ကို မေးမြန်းသိရှိရန်လိုအပ်ပေ သည်။
သမ္မာကျမ်းစာသည် နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားခြင်းသည် သံသယဖြစ်စရာအကြောင်း တစ်ခုမှမရှိပေ။ ထိမောသေထံ ရှင်ပေါလုရေးသားထားသော စာတစ်စောင်ထဲတွင် ရှင်းလင်းစွာတွေ့နိုင်ပါသည်။ “ ထိုကျမ်းစာ ရှိသမျှသည် ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းတော်မူသော အားဖြင့်ဖြစ်၍၊ ဘုရားသခင်၏လူသည် စုံလင်သောသူ၊ ကောင်းသောအမှုအမျိုးမျိုးတို့ကို ပြုစုခြင်းအလိုဌါ ပြင်ဆင်သောသူဖြစ်မည်အကြောင်း၊ ဩဝါဒပေးခြင်၊ အပြစ်ကိုဖော်ပြခြင်း၊ ဖြောင့်မတ်စွာပြုပြင် ခြင်း၊ တရားကိုသွန်သင်ခြင်း ကျေးဇူးများကိုပြုတတ်၏” (၂တိ၊ ၃း၁၆-၁၇)။
သမ္မာကျမ်းစာသည် နှုတ်ကတော်ဖြစ်ကြောင်း သမ္မာကျမ်းစာအရဖြစ်စေ၊ ပြင်ပအရာတို့ဖြင့်ဖြစ်စေ သက်သေ အထောက်အထားများစွာရှိပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာအရ သက်သေပြထားခြင်းသည် ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းခြင်းအားဖြင့် သမ္မာ ကျမ်းစာသည် နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြခြင်းဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာအရ ပထမသက်သေပြသခြင်းသည် သမ္မာကျမ်းစာ၏ စည်းလုံးညီညွတ်မူပင်ဖြစ်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာအုပ်သည် စာအုပ်ပေါင်း ၆၆အုပ် ပါဝင်ခြင်း၊ တိုက်ကြီးသုံးတိုက် တွင်ရေးသားခြင်း၊ ဘာသာစကားသုံးမျိုးဖြင့်ရေးသားခြင်း၊ ခန်မှန်းချေနှစ်ပေါင်း ၁၅၀၀ အတွင်းရေးသားခြင်း၊ စာရေးသူ ၄ဝခန့်က ရှုဒေါင့်အမျိုးမျိုးဖြင့်ရေးသားခြင်းရှိသော စာအုပ်ဖြစ်သော်လည်း သမ္မာကျမ်းစာကို အစအလယ်အဆုံးအထိ ကြည့်လျှင်တစ်ခုတစ်ခု ဆန့်ကျင် ဖက်ရှိခြင်းမရှိပဲ ရည်ရွယ်ချက် တစ်ခုတည်းရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ၎င်းစည်းလုံးမူသည် သမ္မာကျမ်းစာ သည် တခြားစာအုပ်များနှင့်မတူပဲ ထူးခြားကြောင်းနှင့် စာရေးသူများရေးထားမှတ် တမ်းတင်ထားသော အချက်တို့သည် ဘုရားသခင်က လူသားများထံသိစေလိုသော နှုတ်ကပတ် တရားတော် ဖြစ်ကြောင်းကိုသက်သေထူနေပါသည်။
သမ္မာကျမ်းစာသည် နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကို သမ္မာကျမ်းစာထဲရှိ အကြောင်းအရာတို့ဖြင့် သက်သေပြ ရလျှင် ပရောဖက်ပြုခြင်း၌ပါဝင်သော အကြောင်းအရာတို့ဖြင့် ဖော်ပြရပေမည်။ ဣသရေလလူမျိုးတစ်ခုလုံးအတွက်ဖြစ်စေ၊ မြို့ကြီး တချို့တို့၏အနာဂတ်အတွက်ဖြစ်စေ၊ လူသားတို့၏ အနာဂတ်အတွက်ဖြစ်စေ၊ ွလူမျိုးအားလုံးတို့၏ ကယ်တင်ရှင် မေရှီယကြွလာခြင်းအတွက်ဖြစ်စေ (ခရစ်တော်သည် ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်သောသူတို့အတွက်သာဖြစ်သည်)၊ အနာဂါတ် နှင့် စပ်ဆိုင်သောအရာနှင့်ချီသည် ပရောဖက်ပြုချက်တို့ကို သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ပါဝင်လျက်ရှိသည်။ သမ္မာကျမ်းစာ၌ရှိသော ပရောဖက်ပြုချက်တို့သည် တခြားဘာသာရေးစာအုပ်တို့၌ရှိသော ပရောဖက်ပြုခြင်း(သို့) nlostradamus ၏ ပရောဖက်ပြုခြင်း တို့နှင့်မတူပဲ၊ တိကျ၍ အမှန်တကယ်ဖြစ်လာသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာ၌ ပင် သခင်ယေရှုခရစ်တော်အ ကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပရောဖက်ပြုချက်သုံးရာကျော်ရှိပါသည်။ သူသည်မည်သည့်နေရာတွင် မွေးဖွား၍ မည်သည့်မိသားစုမှ ဖွားမြင်လာမည်ကို ပရောဖက်ပြုခြင်းသာမကပဲ သူသည်မည်သို့ အသေခံရမည်ကို၎င်း၊ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ထမြောက်မည် ကို၎င်း ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာ၌ရှိသော ပရောဖက်ပြုချက်တို့၏ ပြည့်စုံခြင်းသည် အတွေးအခေါ်အားဖြင့် မဖော်ပြနိုင်ပေ။ သို့သော် နှုတ်ကပတ်တော်ပြည့်စုံခြင်းအကြောင်းသာဖြစ်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာေဖော်ပြသည့်အတိုင်း တခြား ဘာသာရေးစာပေများ (သို့) တခြားသော ပရောဖက်ပြုခြင်းတို့၌ လုံးဝမတွေ့ရပေ။
သမ္မာကျမ်းစာသည် နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ကြောင်း သမ္မာကျမ်းစာအရ ဖော်ပြချက်သုံးခုမြောက်သည် ၎င်း၏ အခွင့်အာဏာနှင့်တန်ခိုးပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အထက်၌ဖော်ပြထားသော အချက်နှစ်ခုတို့ထက်ပို၍ အမိန့်အာဏာရှိ သည်။ သမ္မာကျမ်းစာတော်သည် တန်ခိုးနည်းသော ဘုရားသခင်အကြောင်း ဖွင့်ဟသော စာအုပ်မဟုတ်ပေ။ သမ္မာကျမ်းစာသည် တခြားသောစာအုပ်များနှင့်မတူ ပဲ အခွင့်အာဏာရှိသောစာအုပ်ဖြစ်သည်။ သဘာဝထက်သာလွန်သော ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးတော်အား ဖြင့် ကျွနု်ပ်တို့အသက်တာထဲ၌ မရေတွက်နိုင်သော နိမိတ် လက္ခာဏာများအား ဖြင့် ထိုအမိန်အာဏာနှင့်တန်ခိုးတို့ကို တွေရှိနိုင်ပါသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူတို့ကို သမ္မာကျမ်းစာက ကျိန်ဆဲသည်။ လိင်တူဆက်ဆံသောသူတို့ကို တားမြစ်ထားသည်။ အနှိမ်ခံသောသူတို့နှင့် ပစ်ပယ်ခြင်းခံသော သူတို့၏ဘဝကို မြှင့်တင်ပေးသည်။ ဆိုးသွမ်းသာ ရာဇဝတ်ပြစ်မှု လွန်ကျူးသူ တို့ကို ေမျှော်လင့်ချက်ပေးသည်။ အပြစ်သားတို့ကို အပြစ်ရှိကြောင်းေဖော်ထုတ်် ပေးသည်။ သမ္မာကျမ်းစာကို ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် အမုန်းပွါးမူတို့ကို ချစ်ခြင်း မေတ္တာ သို့ပြောင်းလဲပေးသည်။ သမ္မာကျမ်းစာသည် နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သောကြောင့် အသက်တာလို မြန်ဆန်စွာပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်သော တန်ခိုး ရှိသည်။
သမ္မာကျမ်းစာသည် နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ကြောင်း ပြင်ပသက်သေအထောက်အထားများလည်းရှိသည်။ ပထမ အချက်သည် သမ္မာကျမ်းစာ၏ သမိုင်းအထောက်အထားများဖြင့် သက်သေပြသခြင်းဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာသည် သမိုင်း၌ ဖြစ်ပျက်သော အကြောင်းအရာများ ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းထဲရှိအကြောင်း အရာတို့၏မှန်ကန်မှုနှင့်တိကျမှု တခြားသော သမိုင်းသုတေသန စာအုပ်များနှင့် တူညီမှုရှိသည်။ သမိုင်းသုတေသနအထောက်အထားနှင့် တခြားစာပေရေးသားချက် အရ သမ္မာကျမ်းစာ၏ သမိုင်းအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းတို့သည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခုတိကျမှန်ကန်စွာ ပြည့်စုံ နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ သုတေသနအားလုံးနှင့်စာမူအားလုံးတို့က သမ္မာကျမ်းစာသည် အကောင်းဆုံးသော ရှေး ဟောင်းစာပေ အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပါသည်။ ဘာသာရေးရှုတောင့်အားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခငျ၏ နှုတျကပတျတောျ ဖြစ်ကြောင်းကို ဖော်ပြရာတွင် သမ္မာကျမ်းစာထဲ၌ရှိသော သမိုင်းအကြောင်းတို့၏ တိကျမှန်ကန်စွာ ဖော်ပြထားခြင်းသည် မှန်ကန်စွာဖော်ပြထားသော သမ္မာတရားဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြထားပါသည်။
သမ္မာကျမ်းစာသည် နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကို ပြင်ပဖြင့်သက်သေပြသခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဒုတိယ အချက်သည် စာရေးသူတို့၏ ရိုးသားဖြူစင်မှုပင် ဖြစ်သည်။ အစောပိုင်းတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဘုရားသခင်က လူတို့၏ အ သက်တာကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် သူ၏နှုတ်ထွက်စကားကို ကျွနု်ပ်တို့အားဖွင့်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤစာရေးသူတို့၏ အသက်တာ ကိုကြည့်လျှင်၊ ထိုုသူတို့သည် ရိုးသားဖြူစင်သောသူများအဖြစ်သံသယရှိရန် မဟုတ်ပေ။ သူတို့၏ အသက်တာနှင့် သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းအတွက် သေသည်တိုင်အောင်ယုံကြည်မှုခိုင်မြဲခြင်းကို ကြည့်လျှင်သူတို့သည် ဘုရားသခင်စကားပြော ခဲ့သော စစ်မှန်သောသာ မန်ယုံကြည်သူများဖြစ်ကြောင်း သေချာစွာသိရှိနိုင်ပါသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းရေးသား ပြုစုသူတို့နှင့် ရာနှင့်ချီသောတခြားယုံကြည်သူများ (၁ကော၊ ၁၅း၆)တို့သည် သခင်ယေရှုသေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပြီးနောက်၊ သူနှင့်အတူ အချိန်ယူ၍သူကို မြင်တွေ့ခဲ့ကြသောကြောင့် သူတို့ဖော်ပြသောအကြောင်းအရာတို့သည် သမ္မာတရားပင်ဖြစ်လေသည်။ သူတို့သည် သခင်ယေရှု၏ထမြောက်ခြင်းကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျမြင်တွေ့သောကြောင့် သူတို့စိတ်ထဲ၌ ရဲရင့်မှုကိုခံစားစေခဲ့ရသည်။ ထိုသူတို့ထံ ဘုရားသခင်ဖွင့်ပြခဲ့သော သတင်းတရားကြောင့် သူတို့သည် သေခြင်းကိုပင်ခံယူရန် ဆန္ဒရှိခဲ့ကြသည်။ သူတို့၏ အသက်တာနှင့်အသေခံခြင်းက သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကို သက်သေထူ ခဲ့သည်။
သမ္မာကျမ်းစာသည် နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ကြောင်း ပြင်ပသက်သေအထောက်အထားဖြစ်သော နောက်ဆုံး သော အချက်သည် သမ္မာကျမ်းစာ၏ မပျက်ဆီးနိုင်မှုပင်ဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာ၏အရေးပါမှုနှင့် ၎င်းသည်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ် သောကြောင့် သမ္မာကျမ်းစာသည် တိုက်ခိုက်ပျက်ဆီးမှုများစွာတို့နှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ တခြားစာအုပ်စာပေတို့နှင့်မတူပေ။ Diocletion ကဲ့သို့သော ရောမအင်ပါယာခေတ်မှစတင်၍ ကျမ်းစာကို တိုက်ခိုက်သော အဖွဲ့အစည်းနှင့် ယခုခေတ်ဘာသာ တရားမသိသူနှင့် အယူဝါဒလွှဲမှားသူများတို့က သမ္မာကျမ်းစာကို ဖျတ်ဆီးရန်ကြံစည်သော်လည်း သမ္မာကျမ်းသည် ထိုသူတို့ ၏တိုက်ခိုက်မှုတို့ကို ခုခံနိုင်၍ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်တွင် အများဆုံးထုတ်ဝေထားသော စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါသည်။
အချိန်တိုင်းတွင် သံသယရှိသူတို့သည် သမ္မာကျမ်းစာကို ပုံပြင်ဒဏ္ဍရီအဖြစ် ယုံကြည်ကြသော်လည်း သမိုင်းသုတေ သီအဖွဲတို့က ၎င်းကိုမှတ်တမ်းအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်းစာကို တိုက်လှန်သူတို့က ၎င်းထဲ၌ရှိသော သွန်သင် ချက်တို့သည် ရှေးဟောင်းခေတ်ဖြစ်၍ ခေတ်မဆန်တော့ကြောင်းပြောခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ၎င်း၏အကျင့်စာရိတ္တနှင့် ဥပဒေ ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံယူချက်များနှင့်သွန်သင်ချက်တို့သည် ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးတွင် သိပ္ပံနည်းအရဖြစ်စေ၊ ယဉ်ကျေးမှုအရဖြစ်စေ ခေတ်မီိသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များ၊ အတွေးအခေါ်ပညာရှင်များ၊ နိုင်ငံရေးသမားများက သမ္မာကျမ်းစာကို ဆက်လက်တိုက် ခိုက်ရန်ကြိုးပမ်းသော်လည်း သမ္မာကျမ်းစာသည် အစအဦး၌ရေးသားပြုစုခြင်းကဲ့သို့ ယနေ့ထိတိုင်အောင် မှန်ကန်၍အသုံးဝင် မည်ဖြစ်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ခုနှစ်အတွင်း မရေတွက်နိုင်သော လူတို့၏အသက်တာ နှင့်ယဉ်ကျေးမှုတို့ကို တိုးတက်ပြုပြင်ပြောင်းစေသော စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာကို မည်မျှပင်တိုက်ခိုက်ရန်၊ ဖျက်ဆီးရန်၊ ရှုတ်ချရန်အတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသော်လည်း ၎င်းသည် ခိုင်မာစွာ၊ မှန်ကန်စွာနှင့် အသုံးကျစွာဖြင့်ပြောင်းလဲမှုမရှိ ပဲ ဆက်လက်တည်မြဲသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဖျက်ဆီးရာဖျက်ဆီးကြောင်းကို ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကြားထဲမှ တည်ရှိသော မှားယွင်းမှုမရှိသောတရားသည် သမ္မာတရားသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဘုရားသခင်က ကာကွယ်စောင့်ထိန်းထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိသာထင်ရှားပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာကို မည်သို့ပင်တိုက်ခိုက်စေကာမူ၊ ၎င်း သည် ပြောင်းလဲမူမရှိ၊ ရွေ့လျော့မူမရှိခြင်းသည် အံ့ဩဖွယ်မဟုတ်တော့ပေ။ ထို့ိပြင် သခင်ယေရှုက“ကောင်းကင်နှင့်မြေ ကြီးမတည်သော်လည်း၊ ငါ့စကားတည်လိမ့်မည်” (မာ၊ ၁၃း၃၂) ဟုမိန့်တော်မူခဲ့ပါသည််။ အထက်၌ဖော်ပြထားသော အချက် အလက်တို့ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း လူတိုင်းက ပြော နိုင်ပါသည်။